Ukuphupha uBeryll Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
IBeryl sisimbiwa esiqhelekileyo kwaye ikudidi lweeminerali zesilicate. Kwimeko ecocekileyo ngokupheleleyo, i-beryl ayinambala. Nangona kunjalo, nelona nani lincinci lezinto zentsimbi kulwakhiwo lwekristale kukhokelela kumbala owahlukileyo. Kungenxa yoko le nto ibheryl ikwabizwa ngokuba lilitye elinqabileyo langaphandle. Intsapho ye-beryl ibandakanya ikakhulu i-emerald, i-aquamarine, i-morganite kunye ne-beryl etyheli, nangona zikhona ezinye iintlobo.
Njengelitye lokuphilisa, kuthiwa i-beryl inamandla kwiindawo zomzimba nezengqondo. Ukusuka kwimbono ebonakalayo, ilitye eliyigugu ikakhulu linesiphumo sokudambisa, njengoko inefuthe lokukhuthaza isibindi. Kodwa inokuba luncedo nakwindawo yesisu. Iziphumo zalo emphefumlweni zixhomekeke kudidi oluthile. Into abanayo bonke ngokufanayo kukomeleza amandla omphefumlo.
Kwindawo yokuphupha, i-beryl inokubonisa izinto ezahlukeneyo, ke umbala wephupha le-beryl unokudlala indima ebalulekileyo apha.
1 Uphawu lwephupha «iBeryl» ​​- Ukutolikwa ngokubanzi.
2 Uphawu lwephupha «Beryl» ​​- ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «Beryl» ​​- ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «iBeryl» ​​- Ukutolikwa ngokubanzi.
Uhlalutyo lwamaphupha ngokubanzi litolika uphawu lwephupha "iberyl" njengophawu lwe Suerte nethemba. Lowo uphuphayo unokukhangela phambili kumaxesha okonwaba ngaphakathi el mundo yomlindo, apho okulindelweyo kunye neminqweno yakho iya kuzalisekiswa. Ungajonga kwikamva lakho ngentliziyo eyonwabileyo.
Ukuba ufumana iberyl enye okanye nangaphezulu ephupheni, kungekudala uza kuba namava axabisekileyo aya kuthi achaze intsingiselo yobomi bakho. I-beryl eluhlaza okwesibhakabhaka njengomfanekiso wephupha ingabonisa umbono omtsha.
I-beryl etyheli, ekwabizwa ngokuba yi-beryl yegolide, ephupheni ibhekisa kuyo. Amathuba amatshaeziza kubakho kunxibelelwano oluninzi. Ukuba umntu olalayo unikwe iberyl xa elele, kuyakubakho ukonyuka kwemali kwihlabathi elivukayo.
Umbala wezimbiwa unokuhlala unomdla ekutolikeni uphawu lwe "beryl". Ke ngoko, imiba yesimboli yephupha elinemibala ehambelana nayo kufuneka isetyenziswe.
Uphawu lwephupha «Beryl» ​​- ukutolikwa kwengqondo
Kwinqanaba leengqondo lokuchazwa kwephupha, iberyl njengophawu lokuphupha yintetho ulutsha lwanaphakade. Umphuphi uzabalazela ukufezekisa oku kwihlabathi lokuvuka. Nangona kunjalo, kuya kufuneka ulumke malunga noku kufuna kwaye ungafikisi kakhulu.
Ngokwenkcazo yamaphupha ezengqondo, uphawu lwephupha "iberili" linokubonisa izinto ezinesimo esikhethekileyo kumphuphi ebomini bokuvuka okanye azithandayo precioso iqwalasela. La ngamaxabiso angaphakathi njengokuthe tye okanye ukuthembeka.
Uphawu lwephupha «Beryl» ​​- ukutolika kokomoya
Ukusuka kwindawo yokomoya, umntu ophuphayo kufuneka azi amandla akhe agqithisileyo ngephupha lakhe le-beryl. Kuya kufuneka uzisebenzise ngokuchanekileyo kwixa elizayo, ngakumbi eyakho. phuhliso lwabantu hambela ecaleni.